खुल्ला आकाश मुनि सेक्सी शालु
न्यूजअभियान | प्रकाशित मिति : २०७३ असार २७ सोमबार |
काठमाण्डौ, न्यूज अभियान । पछिल्लो समय निकै चर्चामा छिन् शालु गौतम । आफ्नो पुर्खौली जन्म थलो तनहुँ जिल्ला भएकी उनि डान्सर, मोडेल, गायिका र ब्यूटिसियन पनि हुन्। पोर्चुगल लागयत युरोपका बिभिन्न देशमा कर्म थलो समेत बनाउँन् भ्याएकी शालुलाई खास गरि बेली-डान्समा पारंगत छिन्। शालु कस्ति छन् तस्बिरले पनि झल्काउँछ ।
नेपाल फर्के लगत्तै उनि आफ्नो गायन कलालाई पनि तिखार्दै अघि बढी रहेकी छिन् । शालु आफै गीत लेख्छिन, संगीत भर्छिन र गाउछिन् पनि । हो यसैले गर्दा होला पछिल्लो समय फेसबुकमा उनको फलोअरको संख्या दिनदिनै बढ्दैछ। त्यसो त सोसल मिडिया फेसबुक, ट्वीटर, इस्टाग्राम लगाएतमा शालुका फ्यानहरुले हट, सेक्सीको तक्मा नै दिएको पाइन्छ शालुलाई । यस कुरालाई शालुले सकारात्मक र नकारात्मक दुवै पाटो बाट बुझेर लिने गरेकी छिन, प्रतिक्रिया हो यसलाई मैले चिर्दै अघि बढ्न झन थप हौसला मिलेको छ उनले भनिन् ।
उनको नेपालमा भन्दा यूरोपमा रहेका नेपालीहरुविच बढी चर्चा ज्यादा छ। पोर्चुगलमा बिदेशीहरुलाई बेली-डान्स सिकाउने शालुले केहि गीतमा मोडेलीङ गरेकि छिन् भने केहि गीत आँफैले पनि गायकि छिन्।
यो पनि हेरौ /पढौ :- # बेईमानी शिवजीले हट एण्ड सेक्सी शालुलाई झुक्याएपछी यसरी गरिन पुकार भिडियो सहित
एनभिएम ग्रुपको निम्तालाई स्विकारी साप्ताहिक कार्यक्रम साझा भिजनमा कुराकानीको क्रममा शालु भन्छिन् बिदेशमा जहाँ जुन देशमा पुगे पनि आफ्नो देश नेपालको माया भई हाल्छ नि ? त्यसैले त म फर्केर आए र त अहिले यहाँ छु । आफ्नो प्रस्तुती दिनका लागी देशको कुना काप्चा धेरै ठाउँमा पुगेको छु, विशेषगरि बेली-डान्सको लागि प्रसंसा पाँउछु। हाँसो थप्दै भनिन् गायन चाँहि बिशुद्ध शोख हो मेरो, सिक्दै पनि छु गाउँदै पनि छु ।
रङ्गीन दुनियामा रम्न रमाउँन कसलाई मन लाग्दैन होला र यो संसारमा ? सोहि रङ्गीन दुनियामा रम्दै पर्दा मार्फत पछिल्लो समय आफ्नो गीतको म्यूजिक भिडियो पनि तयार पारेकि छिन् उनले ।
यो पनि हेरौ /पढौ :- # हट शालु भन्छिन् - छोटो लुगा फालेर रातो साडी लगाए (भिडियो हेर्नुस् )
तिनै गीत बजारमा आए संगै शालुको चर्चा बजारमा चुलिएको पाइन्छ । ‘नेपालकी छोरी’ले राम्रै बजार पाएका कारण धेरै स्रोताहरुको मन जित्न पनि सफल भईन् शालु ।
नेपाली नारीहरुको आउदै गरेको महान पर्ब तिज गितको भिडियो समेत युट्युबमा सार्बजनिक गरि सकेकी शालु मिजासिली, फरासिलो व्यबहारले पक्कै नेपाली कला क्षेत्रको खडेरीलाई पुर्ती गर्नेछिन र आफुलाई स्थापित गायिका/मोडलको रुपमा चिनाउने छिन भन्ने कुरामा कुनै दुईमत छैन ।
एनभिएम ग्रुपको तर्फबाट सफलताका लागि हार्दिक शुभकामना ! साझा भिजनमा उनै गायीका/मोडल शालु सँग गरिएको अन्तर्वार्ता भिडियो केहि दिन पछी प्रकाशन हुने जानकारी गर्दछौ र यसका लागि न्यूज अभियान डट कम लगअन गरेर हेर्दै रहनु होला । कुराकानी पछी हाम्रो आग्रहमा न्यूज अभियानको प्रांगणमा केहि फोटो शुट दिन समेत पछी परिनन् । तस्बिर / उद्धव तामाङ